Hogaamiyaha Ururka ONLF oo Itoobiya gaaray – Radio Daljir
Hogaamiyaha Ururka ONLF oo Itoobiya gaaray
Diseembar 1, 2018 5:53 g 0
Waxaa gaaray magaalada Addis Ababa ew dalka Itoobiya wafti uu hoggaaminayo Guddoomiyaha ururka ONLF Admiraal Maxamed Cumar Cismaan,iyadoona si weyn loogu soo dhaweeyey.
Waftigan ,waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan Dowlad Deegaanka Soomaalida oo uu kamid yahay Madaxweynaha Dowlad deegaanka,Wasiirka Maaliyadda,mas’uuliyiin ka socotay dalka Kenya,shacab iyo odayaasha dhaqanka.
dhinacale Guddoomiyaha ururka ONLF Admiraal Maxamed Cumar Cismaan oo saxaafadda kula hadlay Addis Ababa ayaa sheegay in halgankooda ay si nabadgelyo ah kusii wadi doonaan isla markaana uu ku rajo weyn yahay in shacabka ay nabadda ka shaqeyn doonaan.
Admiraal Maxamed Cumar Cismaan ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in uu u ambabixi doono Dowlad Deegaanka Soomaalida soo dhaweynta kaddib.
Doorashadda koonfur galbeed oo mar kale dib u dhacday